Tonotosa ny talata 15 jolay ny fanadinam-panjakana voalohany
Nitombo ny isan’ny mpiadina tamin’ity taona ity
Tontosa tao anatin’ny ora-mikinja ny fanadinam-panjakana CEPE sy ny fifaninana hidirana amin’ny kilasy faha 6 teto Toamasina. Hoan’ny fohibem-pitsarana CEG Ratsimilaho, izay ao anatin’ny foibem-panadinana CEG Ratsimilaho dia mahatratra 31 no tsy tonga nanao ny adina; Raha toa ka 2120 no isan’ny voasoratra anarana, izany hoe 2098 no tonga niatrika fanadinana.
Raha tsiahivina ny fandaharam-potoana nanombohana ny maraina dia tamin’ny 8ora sy 30 minitra no nanomboka ny adina ka ny taranja Kajy (Calcul) no natrehin’ny mpianatra voalohany ary nodimbiasan’ny taranja Lazaolana (Probleme), S.V.T sy Tantara. Ary ny hariva kosa dia ny taranja Malagasy, ny Frantsay ary Jeografia (Geographie) no namarana ny fotoam-panadinana.
Raha ny isa eto Toamasina, dia 7302 no isan’ireo mpiadina voasoratra anarana ka miparitaka amin’ny fohibem-panadinana miisa 7, izay mitsinjara ho toy izao :
EPP Pointe Tanio
CEG Radama I
CEG Ramatahitra I
Tsara no manamarika fa 3492 amin’ ireo mpiadina dia zazalahy ary 3710 kosa no zazavavy.
Miisa 167 ireo nisafidy ny hifaninana hiditra ho amin’ny kilasy faha 6 fotsiny, raha toa ka 298 kosa ireo hanala ny fanadinam-panjakana CEPE ihany ary miisa 6757 ireo hanala CEPE sy fifaninanana hidirana ho ao amin’ny kilasy faha 6.
Nahitana fivoarana io antontan’isa io tamin’ity taona ity satria 6928 no isan’ny mpiadina tamin’ny taom-pianarana 2012-2013.
Na dia teo aza ny ora-mikija nandritra ny andro dia nizotra tam-pilaminana tamin’ny ankapobeny ny fanadinana, araka ny fantatra dia amin’ny alarobia izao no hanomboka ny fitsaram-panadinana.
(62) Erino RAZAFIMANANA : 16-07-2014 - 18:30